WhatsApp dia hanampy fanamarinana dingana roa amin'ny dikan-teny ho an'ny macOS | avy amin'ny mac aho
WhatsApp dia hanampy fanamarinana dingana roa amin'ny dikan-ny macOS
WhatsApp dia nandray izany mora foana rehefa tonga manampy asa vaovao ary ambonin'izany rehetra izany dia manolotra ny fahafahana mampiasa ny sehatra misy azy amin'ny fitaovana hafa nefa tsy mila ny iPhone ho alefa.
Raha miresaka momba ny fiarovana atolotry ny WhatsApp antsika isika dia tsy maintsy miresaka momba ny fanatsarana amin'ity sehatra ity izay tian'ny fampiharana ampidirina amin'ny fanampiana. fanamarinana dingana roa mandritra ny fizotry ny fidirana, na amin'ny rindranasa ho an'ny macOS sy Windows ary amin'ny dikan-tranonkala.
Araka ny filazan'ireo lehilahy ao amin'ny WABetaInfo, WhatsApp dia hangataka ireo mpampiasa mamorona PIN 6 isa ho sosona fiarovana fanampiny ho an'ny kaontinao, kaody PIN izay angatahin'ny rindranasa ho an'ny macOS sy Windows ary rehefa mampiasa ny dikan-tranonkala.
WhatsApp dia efa ela no niasa tamin'ny fomba hahatratrarana ireo serivisy fandefasan-kafatra mpifaninana amin'ny fanomezana fanohanana ho an'ny fitaovana maro. Na dia eo aza ny lazany dia mbola iray amin'ireo fampiharana fandefasana hafatra tsy hita amin'ny takelaka izy io, io no teboka ratsy indrindra.
Hiova izany amin'ny ho avy, miaraka amin'ny WhatsApp manokatra lalana ho an'ny mpanjifa vaovao miaraka amin'ny a tena fanohanana fitaovana maro, ary sosona fiarovana fanampiny izay ahafahana manamarina raha tompon'ny kaonty ara-dalàna ny mpampiasa manandrana miditra.
Ny pikantsary azon'ny WABetaInfo asehoy ny fomba ahafahan'ny mpampiasa mamorona PIN isa enina mba hiarovana ny kaontiny WhatsApp, izay tsy maintsy ampidiriny isaky ny manandrana miditra amin'ny fitaovana hafa izy ireo.
Na izany aza, toa tsy azo atao ny PIN, ary ny mpampiasa dia afaka mamela na manafoana izany araka izay tiany, noho izany, indray mandeha, WhatsApp dia aseho amin'ny fanaovana zavatra antsasak'adiny ary tsy tena mampiseho finiavana hanolotra tena fanohanana fitaovana maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » WhatsApp dia hanampy fanamarinana dingana roa amin'ny dikan-ny macOS
Fanamby fiofanana vaovao ho an'ny Apple Watch tamin'ny Febroary
Misy vulnerable hita ao amin'ny fakantsarin'ny Mac fa efa fantatry ny Apple izany